Drawing & OSU ဂိမ်းအတွက်အထောက်အပံ့ပေးသော Android / Windows & Mac ဒီဂျစ်တယ်ဂရပ်ဖစ် - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်အကောက်ကင်း ၀ ယ်ခြင်း WoopShop®
Drawing & OSU ဂိမ်းအတွက် Android / Windows & Mac Digital Graphic Tablet ကိုထောက်ပံ့ပါ
$48.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $71.99
မှစ. သင်္ဘောများ တရုတ်နိုင်ငံ ဘရာဇီး ပြင်သစ် ရုရှားပြည်ထောင်စု အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၾသစေတးလ်
တရုတ်နိုင်ငံ ဘရာဇီး ပြင်သစ် ရုရှားပြည်ထောင်စု အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၾသစေတးလ်
Drawing & OSU Game - China အတွက် Android / Windows & Mac Digital Graphic Tablet ကိုထောက်ပံ့ပါ backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား (ထောင့်ဖြတ်): 4"
screen resolution: X ကို 1920 1080
အမျိုးအစား: ဂရပ်ဖစ် Tablet များ
interface အမျိုးအစား: ယူအက်​​စ်ဘီ
Tablet ကိုအကျယ်: 174mm
Tablet ကိုအရှည်: 211mm
ဘောပင်နည်းပညာ passive လျှပ်စစ်သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု
Express Keys:4Express သော့များ
လုပ်ငန်းခွင်:ရိယာ: 165.1x 101.6 မီလီမီတာ / 6.5 *4လက်မ
OS သဟဇာတ: Android 6.0, Win7နှင့် macOS 10.12 နှင့်အထက်ဖြစ်သည်
အရွယ်အစား: 211 × 174 × 8mm (8.30 * 6.85 * 0.31 လက်မ)
အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်သောနေရာ - 165.1x 101.6 မီလီမီတာ (6.5 *4လက်မ)
ဘောပင်ဖိအားအာရုံခံ: 8192 အဆင့်ဆင့်
တိကျမှန်ကန်မှု: 0.3mm ±
OS Compatibility - Win7နှင့် MacOS 10.12 နှင့်အထက်ဖြစ်သည်
Passive Pen: ၎င်းသည်ဘက်ထရီနှင့်အားသွင်းစရာမလိုသောအဆင့်မြင့် passive နည်းပညာကိုအသုံးပြုထားသောဘက်ထရီနှင့်ကင်းသောတံတိုင်းဖြစ်သည်။ ဤပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိသည့်ဘောပင်သည်သင်၏လည်ပတ်မှုကိုအနှောက်အယှက်မဖြစ်စေရန်စဉ်ဆက်မပြတ်ပုံဆွဲခြင်းနှင့်ကစားခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်။ ထို့အပြင်2ပရိုဂရမ်အမြန်သော့များနှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင် toggle သည် brush နှင့်ဖျက်ရန်အကြားလုပ်ဆောင်မှုကိုအမြဲပြောင်းလဲပေးသည်။
8 Pen Nibs - အပို 8 nib များအစားထိုးခြင်းတွင်ပါဝင်သည်။
8192 Level Pen - သင့်အားလက်ချောင်းထိပ်များမှတိကျသောထိန်းချုပ်မှုနှင့်တိကျမှုများကိုပေးစွမ်းနိုင်ပြီး၊ သဘာဝလိုင်းများပိုမိုယူဆောင်နိုင်ပြီးဖန်တီးမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။
Express Keys:4စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သော Express ခလုတ်များကိုသင်ကြိုက်သလောက်လုပ်နိုင်သည်။ အလုပ်လုပ်နေစဉ်အတွင်းသူတို့ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏လုပ်ငန်းအသွားအလာကိုများစွာတိုးတက်စေလိမ့်မည်
OS / Software နှင့်လိုက်ဖက်သောအရာ - Android 6.0၊ Win7/ 8 / 10 နှင့် Mac OS 10.12 နှင့်အထက်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ ပုံဆွဲဆော့ဖ်ဝဲလ်အများစုဖြစ်သော Adobe Photoshop, Illustrator, Clip Studio, Lightroom, Sketchbook Pro, Manga Studio, CorelPainter, FireAlpaca, OpenCanvas, Paint Tool Sai2, Krita စသည်ဖြင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ Adobe Acrobat Reader DC လက်မှတ်လျှောက်လွှာနှင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ပါ။ ဒီဂျစ်တယ်စီးပွားရေးလက်မှတ်တစ်ခုလိုအပ်သည်ကိုကျေနပ်သည်။
အဆင်ပြေသောဒီဇိုင်း - တက်ဘလက်၏တည်ငြိမ်မှုကိုသေချာစေရန်4anti-slip ရော်ဘာကိုထုတ်လုပ်သည်။ သင်၏ desktop သို့မဟုတ် PC နှင့်ချိတ်ဆက်ရန် micro USB port ကိုရနိုင်သည်။ ဘုတ်၏ထိပ်ဆုံးတွင်4အမြန်သော့များနှင့်အတူလက်ဝဲမုဒ်ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်ဘောပင် 180 °ကိုလှည့်ရန်မလိုအပ်ပါ။
တစ်နှစ်အာမခံ - လူ့လုပ်မဟုတ်သောပျက်စီးခြင်းနှင့်မတော်တဆထိခိုက်မှုများအပေါ် အခြေခံ၍ 1 နှစ်အာမခံချက်
4 +2Programmable Express Keys: Tablet ပေါ်ရှိ Express Express Keys + ဘောပင်ပေါ်ရှိ4ဘောပင်ခလုတ် --- သင့်ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုအပေါ်မူတည်။ စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်။ အကြီးအကျယ်သင်၏အလုပ်ထိရောက်မှုတိုးမြှင့်။ OSU စသည်ကဲ့သို့ Rhythm ဂိမ်းများကစားသောအခါဤခလုတ်များသည်ပိုမိုအားသာချက်များရှိသည်။
Dual Monitor: သင်2မော်နီတာများနှင့်အလုပ်လုပ်သည့်အခါ monitor1 သို့မဟုတ် monitor2 မှသာလျှင်ကလောင်တုန့်ပြန်မှုကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
Window System: ကီးဘုတ်ပေါ်ရှိ "windows + p" ကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက် "Duplicate" သို့မဟုတ် "Extend" ကိုရွေးချယ်ပါ။
အကယ်၍ သင် Extend Mode ကိုရွေးချယ်ပါက ကျေးဇူးပြု၍ GAOMON Driver ကိုဖွင့်သည်။ Work Area ---- ကျေးဇူးပြု၍ "Display 1 / Display2/ All Displays" ကိုနှိပ်ပြီး၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုအားလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ပါ။
Mac System: System Preference --- Display --- အစီအစဉ် --- --- Mirror Display Box ကို Check or Uncheck လုပ်ပါ။
အကယ်၍ သင်သည်“ Mirror Display box ကို uncheck” (တိုးချဲ့ထားသော mode) ကိုရွေးချယ်ပါက ကျေးဇူးပြု၍ GAOMON Driver ကိုဖွင့်ပါ။ Areaရိယာအကျယ် ---- ကျေးဇူးပြု၍ "Display 1 / Display2/ All Displays" ကို သတိပြု၍ အလုပ်တစ်ခုအဖြစ်တစ်ခုရွေးပါ။ ။
နွေးထွေးသောသိကောင်းစရာများ - အကယ်၍ သင် windows system ကိုအသုံးပြုတယ်ဆိုရင် driver ကို install လုပ်တဲ့အခါသင့် mouse ကိုညာဖက်နှိပ်ပြီး Run as administrator ကိုနှိပ်ပါ။ Mac system အသစ်ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် Mojave 10.14 version ။ ကျေးဇူးပြု၍ driver ကိုတပ်ဆင်ပြီးနောက် GaomonTablet နှင့် TabletDriverAgent ကိုအဖြူရောင်စာရင်းထဲသို့ထည့်ရန်သတိရပါ။
1xMicro USB ကြိုး
ဤအရာသည် bma demais အတွက်ဖြစ်သည်။ စင်ကြယ်သောအလုပ်,6သည်ကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ဆောင်မှုများကိုပြုလုပ်သည်။ Recomendo5*
ဒါဟာနှစ်ရက်အီတလီမှာပြင်သစ်ကနေတင်ပို့လာ၏။ ဆွဲတဲ့တက်ဘလက်ကအရမ်းကောင်းတယ်၊ စျေးကလည်းကောင်းတယ်။ ငါဒီထုတ်ကုန်အတွက်တကယ်ဝမ်းသာတယ် 10/10 အကြံပြုလိမ့်မယ်။
တိုးချဲ့ ပြီးပြည့်စုံကောင်းမွန်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ encantadísima con el producto ။
Recibido súperrápido!5ကdías en casa ။ Tiene muy buena pinta ။ PC ကိုသင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်, ထိုအမှားများကိုသင်လိုအပ်သောလက်စွဲစာအုပ်။ သူသည်ဓာတ်ပုံကိုကြည့်ပြီး 10min ကိုသုံးသည်။